Ubomi emva kweArcView 3.3… GvSIG-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ubomi emva kweArcView 3.3 ... GvSIG
Ubomi emva kweArcView 3.3 ... GvSIG
Ndigqibile ukufundisa imodyuli yokuqala ye-GvSIG, kwiziko ngaphandle kokusebenzisa inkqubo eza kusetyenziswa ngoomasipala, ndinethemba lokunika uqeqesho kwi-GIS yasimahla. Eli ziko liphuhlise isicelo kwiAvenue kodwa xa becinga ngokufudukela kwiArcGIS 9, bandinike ithuba lokuba ndibabonise ezinye iindlela zasimahla kwaye lo mbandela uhambe kakuhle. Kubafundi abasi-8, mnye kuphela kubo owaziyo I-ArcGIS 9 ngokungaguquguqukiyo, ekufumaneke ukuba bayayilungisa ngokulula i-GvISG kwaye nangona besazi ukuba i-ESRI yitekhnoloji eyaziwa ngcono kunye nophawu olubekwe bhetele, baye bagqiba kwelokuba abanayo imali yokutyala imali kwiilayisensi ezili-10 zeGisDesktop. , 2 ukusuka kwiArcEditor, 1 GisServer kunye nolunye ulwandiso ezintathu… ah! kunye neelayisensi ezingama-36 zabathengi beprojekthi yokulinga.
Nantsi ndikuxelela ukuba kwakunjani.
Abasebenzisi be-8 yeArcView 3.3, nangona iteknoloji yexesha elidala kuncenkceshwa ngamaziko amaninzi ... ayayixabisa ngenxa yokulula kwayo kunye nenani labathengi elilawulayo.
Umprogram olawula iJava kakuhle kwaye oye waqala ukusebenza ekwakheni izandiso ze-GvSIG uphuma kubo bonke abafundi nakuba ebenze ngaphezulu NetBeans kwaye kubonakala ngathi isigxina sithathwe kwizinwele ezenzayo eclipse. Kwakukho nomntu owaziyo ukwenza inkqubo kwiAvenue, abanye ababhekisi phambili ngakumbi kuyilo lwewebhu ngomyalelo olungileyo we-MySQL / PHP. Ezinye iingcali zobuchwephesha ekutshabalaliseni i-apr.
Enye yeekomiti yayine Linux Ubuntu, kukho konke kwakumnandi.
Iikhompyutha ze-5 zineXP, kwakungekho nkinga
Iikhompyuter ezi-2 zineWindows Vista, bekukho izehlo ezininzi zempazamo zokuphunyezwa kweJava, ngokuchanekileyo kuba ufakelo olwenziwe lwalungohlobo lweGvSIG oluphathekayo. Eyona ndlela ilungileyo ukufaka uqhagamshelo kwiwebhu, njengoko inkqubo ikhangela kuhlobo lweJava Runtime yeNdawo elungele le nkqubo. Ngokubanzi iimpazamo zenzekile xa kulayishwa i-raster okanye kusenziwa umbuzo kumakhi we-sql.
Kodwa ngokubanzi ukusebenza kwakulungile nangona ezinye iikhompyuter zazinenkqubo elayishiwe, ngokuqinisekileyo ukufaka kunye nokukhipha okanye indawo encinci yediski. Kwezi, ukusebenza kwenkqubo kuva ngathi kuyacotha ... phakathi kwabo ilaptop yam esele icela ukuyivuselela emva kokuba ibekwe kwimilinganiselo eyahlukeneyo yeGolgotha.
Ukungalunganga kweGvSIG ngaphezu kweArcView 3x
Xa besenza uhlolo lokuqhathanisa phakathi kwento ababecinga ukuba ilahlekile kwi-ArcView, ezi zinto zaziqonda:
Kula macwecwe, engakwazi ukutshintsha umyalelo weekholamu nge-drag drag
Xa ungenisa idatha kwifayile ye-csv, ifuna ukuba uphawu olwahlula uluhlu lube semicolon (;) okuthetha ukuba kufuneka utshintshe ubumbeko lwengingqi kwiWindows ukuze xa uthumela ngaphandle kwi-Excel izakuhamba ngoluhlobo ... kwaye ukuba sele iifayile eziguqulweyo kukutsala. Ukongeza, i-Excel 2007 ayisakwazi ukuthumela ngaphandle kwi-dbf.
Izitayela zemigca kunye neepalati zibonakala zilinganiselwe xa kuthelekiswa nalabo bazisa iArcView ... Ndicinga ukuba izitayela ezininzi zikhutshelwa ukusuka kwenye indawo kwiwebhu kodwa incwadana ayifumananga oku kubonisiwe.
Izinketho zokutshintsha ulawulo lwemihlaba kwiitheyibhile zincinci
Kwakungenakwenzeka ukuletha igridi kwiimephu, njengendawo yokudibanisa igridi
Nangona kule modyuli yokuqala yayingagcinwa kulawulo lweembono, amatafula kunye neemephu, oku yiloo nto abayithandayo kakhulu:
Izinketho zokukhetha imibala ngexesha lokuxubusha
Iipropati zeziqendu ukuba zikwazi ukukhetha ubuncinci kunye nobuninzi bokubonisa zoom
Ifowuni yokuqhayisa njengomfanekiso we-georeferenced
Ikhetho lokuya kulungelelaniso oluthile
Ukuqoqwa kwamacandelwana kunye nomkhetho womthi kunye nesibonakaliso (+)
Ikhono lokongezelela ukujonga kwiimbono kwaye kungekhona nje iprojekthi
Ukutolika okuchanekileyo kubalinganiswa abakhethekileyo njengemigama kunye ñ
Okukhethwa kukho ukuchaza apho ivela khona idatha yolwazi
Ukukwazi ukuphuhlisa, ukwazi ngokubanzi nayiphi na imisebenzi yeGvSIG njengenxalenye yeJava
Thumela kwi pdf
Ukudala amafowuni njengomakishi kwiimbono
Kwiiveki ezimbalwa kufuneka ndinike imodyuli yesibini, ebandakanya ukwakhiwa kwedatha, ukudityaniswa kwezandiso, i-SEXTANTE kwaye ke iya kuba yeyesithathu apho siza kubamba ngesihloko sokwenza iinkonzo ze-OGC. Ngeli xesha, bebefudusa i-apr yabo kwi-gvp kunye nokudibanisa ukusebenza ababengenako ngeArcView.
I-IMS Ininzi, ukwenza enye into
Into ongayenza ngeArcView 3x inokwenziwa nge gvSIG
Ndineengxaki zokufaka i-arcview ngokujonga. Ngoko ndaqala ukukhangela ezinye iindlela, ngoko ndakhubeka kwiGvSIG. Kunokwenzeka ukuba usebenze kunye nemigca yolwazi malunga nemilambo, oko kukuthi, ukuphathwa kwamacandelo, ubude, iintsebenziswano kunye neepolgoni. Yaye ukuba uthetha inqwaba yeenkcukacha zolwazi ezifana nayo yonke imilambo eMzantsi Melika ngendlela ecacileyo?
Sawubona Manel, ndiya kuphonononga isiphakamiso sakho kwenye yale mihla
Ndingathanda ukuba wenze isifundo esifanayo kunye nesoftware yeMiraMon. Ndidlalile into kwaye kubonakala ngathi isoftware enomdla kwimicimbi ye-GIS kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukuqonda okude ... Ayisiyomithombo ivulekileyo njenge-gvSig kodwa kufanelekile ukuzama ...
I-1.9 inguqu iza neenombolo ezininzi ze-SEXTANTE ezifakiwe
NGABA ukhe wazama ulwandiso lweGvSig olubizwa ngokuba yiSextant yeJunta de Extremadura ……………………
Ewe, isihloko sobuthixo endishiye kumondyu olandelayo, okwakhiwa kwedatha ukususela ekubeni abasebenzisi beArcView3x abacaci ngokucacileyo malunga nobubanzi balo. Ndiyazi kwakhona ukuba i-topology isaqhubeka nokuvavanywa kwi-GvSIG.
Ndiza kuqwalasela uluhlu lokusabalalisa
Igridi yemephu yenye yezo zinto zilindileyo kuluhlu 'lwezicelo zomsebenzi' kwaye kungekudala kuya kujongwana nazo.
Ngendlela, kuhlale kucebisekile ukupapasha uluhlu lwenkonzo yeprojekthi, kwiwebhsayithi ye-GVSIG (kwindawo yokunxibelelana), njengokuba nayiphi na imibuzo ephakamileyo yokusetyenziswa kwansuku zonke ingathunyelwa kuluntu.
Le 1216 yokwakha, ukongeza imifuziselo, umkhondo kunye nezinye functionality ekude-yokuqonda kunye yethopholoji efanayo, ukuba unomdla jonga. Nokuba, njengoko George uthi, oku uguqulelo yokuhlola kufuneka ingasetyenziswa xa umsebenzi, kusoloko kulungile ukwenza makwazeke oko abafundi (nkqu lilixa lokugqibela kunjalo), ngoko ke sinengcamango yokuba into ezayo.
Siyaqwalasela ukungalungi ukwenzela ukuphucula encinci.
Ndiyabulela idatha, ndiza kukukhuphela i-version Yokwakha, ngoko ndiya kuhlaziya kwizinto ozikhankanyileyo.
Ngokuphathelele igridi kwiimephu, ngaba kukho nayiphi na isandiso?
Wow G!, Inqaku elikhulu.
Ngokuphathelele i-Vista: zikhona ezinye iibgs eziziwa malunga neVista ezityululwe. Kungekudala uFran Peñarrubia ushicilele inguqulo ephathekayo ye-gvSIG ekufuneka isebenze kule OS. Ndiyicinga ukuba uyisebenzise loo nto kodwa njengokuba andiyazi ngokuqinisekileyo ndiza kudibanisa ikhonkco:
Ngokumalunga nophuhliso: loo mfo uya kuyithanda i-Eclipse, ndikholelwe… xa ezama ukukhwela i-gvSIG kwiiNetbeans (ngaphezulu kwama-700.000 emigca yekhowudi) ukuxelele.
Ngokuphathelele CSV: Qiniseka ukuba uyazi, ubani ukusebenza mphandle kuye wamchukumisa, kodwa ndikhetha ukuba kumazwe uze nazo naziphi izicatshulwa umhleli KAKUHLE ezifana Iphetshan lokubhala ++ okanye gVim kuba indawo wobomi yaye ukulungele gvSIG. Kunjalo inxalenye gvSIG ziyaphucuka.
Ngokubhekiselele kulo mfuziselo: ngaba uzame nawuphi na ukwakhiwa kwangoko? Ziyiinguqulelo zentuthuko (ungasebenzisi kunye nedatha ngaphandle kokusekela, uqonda) kwaye uzise entsha ye-gvSIG. uya kuthanda Zama i-1216.
Nangona kunjalo, ndiyathemba ukuba unokunika izifundo ezininzi ze-gvSIG kwaye usitshele amava akho. Ziyamangalisa kakhulu!
gvSIG: Izihloko ze-36 zeeNtsuku ezithandathu